Ukutyeba ngefowuni yakho emelwe ngumzobo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukubonisa ukutyekela kwethu ngokuhambahamba kwimifanekiso eqingqiweyo
Akukho nto inokuthethwa malunga nesi sihloko. Kuya kufuneka sijonge nje kuthi xa sisihla ngesitrato kuso nasiphi na isixeko ukubonisa inqanaba lokuthanda kakhulu kwezi fowuni zikamtyholi.
Olu luvo olungemva kwalo umfanekiso oqingqiweyo owenziwe ligcisa laseBritane ngubani ongafuniyo ukuyeka ukukhathazeka ngesixhobo esinokuphantse sitsalele esihogweni okanye kumtyholi. Zininzi iiyure ezichithwe phambi kweso sikrini kangangokuba uGali May Lucas uthathe ixesha lakhe ukuyenza icace gca kulo mfanekiso.
Umzobo obonisa kubantu abohlukeneyo bathe phithi ngokupheleleyo nescreen se-mobiles zabo. Abantu baphinde benza mhlophe kwaye, ngenxa yokukhanya okukhutshwe ngumzobo weselfowuni, inika uvumelwano ngakumbi kwinjongo efunwe nguMeyi uLucas.
Kwakunjalo nomkroli uKaroline Hinz Ngayo wenze uthotho lwabantu apho ubuso babo bukhanyiselwe kukuqaqamba kunye nokukhanya okuvela kwiscreen seefowuni eziphathwayo.
Ukufakwa kobugcisa kuye kwabizwa "Ukungeniswa kukukhanya". Injongo yegcisa kukuba nabani na angamelwa ngulo mzobo. Kwaye ukuba lo mfanekiso kunye nemeko unokufumaneka kuyo nayiphi na ikona, isitalato, ikona okanye indawo yazo naziphi na izixeko needolophu zeli lizwe kunye nezinye ezininzi.
Masithi ngoku akukho mntu Ndiyakwazi ukwabelana ngale mizuzu kwi-elevator nomnye umntu ngelixa uneselula yakho entsha esandleni sakho apho unokujonga khona iinethiwekhi zakho zentlalo, phendula umyalezo ofanayo ophindaphindiweyo ovela kwiqabane lakho okanye ubone iindaba zemihla ngemihla ziphindaphindwa suku ngalunye.
Sele sinayo USergio Ingravalle ubonakalisa eyakhe imbono yalonto ubomi bedijithali apho sizaliswa mihla le.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ukubonisa ukutyekela kwethu ngokuhambahamba kwimifanekiso eqingqiweyo
Amandla eBrushes kwi-Illustrator